जापान र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > जापान र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति
टोकियो । जापान र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति भएको छ । विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी ७) को बैठकमा दुबै मुलुकका नेताबीच फ्रान्समा वार्ता हुनुअघि नै यस्तो सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
अमेरिकासँगको व्यापार वार्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका जापानका अर्थमन्त्री तोशिमिचु मोटेगीले संवाददाताहरुसँग वासिङ्टनमा शनिवार संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘वार्तामा ठूलो प्रगति भएको छ ।’
मन्त्री मोटेगीको जापानी प्रतिनिधिमण्डल र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटिजरबीच तीन दिन व्यापार वार्ता भएको थियो । ‘वार्तामा भएका प्रगतिका बारेमा जापान–अमेरिका सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिनेछ’ मोटेगीले भने । उक्त सम्मेलन फ्रान्समा आयोजना हुने जी ७ को बैठककै अवसरमा फ्रान्समा हुँदैछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेबीच निकै सुमधुर सम्बन्धी रहेको छ तर राष्ट्रपति ट्रम्पले जापानमाथि द्विपक्षीय व्यापारमा अमेरिकाबाट अनपेक्षित लाभ पाइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले दुबै मुलुकबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई बढी समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन ।
लाइटिजर र मोटेगी दुबैबीच जापानले अमेरिकी कृषिजन्य वस्तुमाथि लाग्दै आएको करलाई ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टिपिपी) सम्झौता बमोजिम अरु देश सरह बनाउन सहमति भएको छ ।
साथै जापानले अमेरिकाबाट आयात हुने मासुजन्य वस्तुको कर घटाउने तथा दुधजन्य वस्तुमा लागिआएको कोटा नराख्ने सहमति भएको जापानी प्रसारण संस्था एनएचकेले बताएको छ ।
जापानले यसअघि टिपिपी सम्झौता बमोजिम कृषिजन्य वस्तुका सन्दर्भमा अरु मुलुक सरहको व्यवहार गर्ने वचन दिँदै आएको छ । पछिल्लो सहमतिमा अमेरिकाले जापानी औद्योगिक वस्तुमाथि अतिरिक्त कर नलगाउने बताएको छ ।
तर जापानलाई टाउको दुखाई भएको जापानी सवारी साधनमाथि लाग्ने अमेरिकी करहरुका बारेमा भने अहिल्यै कुनै सहमति भएको छैन ।
तर दुबै मुलुकबीच अन्तिम सम्झौता अगामी सेप्टेम्बर महीनाको अन्त्यसम्ममा हुने जापानी अखबारहरुले उल्लेख गरेका छन । -रासस/एएफपी
२०७६ भदौ ८ गते १५:५५ मा प्रकाशित
अनुसन्धानको निष्कर्षः रवि लामिछानेविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा दर्ता, अव के हुन्छ ?
गण्डकी प्रदेशमा ४ महिनामा १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने
तपाई के गर्दै ? चीन, कोरिया, बंगलादेशबाट तपाईको खेतमा खेती गर्न आउँदैछन् है !
नागरिक लगानी कोषलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग तुलना नगराैँ : अर्थमन्त्री खतिवडा
किन राख्यो चीनले नेपाली भूमिमा सीसी क्यामेरा ?
मेगा बैंकको ‘मेगा मेहन्दी उत्सव’ : सबै शाखामा निःशुल्क आकर्षक मेहेन्दी लगाउन पाइने